Archive du 20170208
Polyteknika Vontovorona Nifandona ny mpianatra sy ny Emmoreg
Nigrevy ny mpianatry ny Polyteknika Vontovorona omaly talata 7 febroary. Tsy fisian�ny jiro teny amin�ny toeram-ponenana sy ny toeram-pianarana no antony.
Monja Roindefo Niampanga an-dRavalomanana
Mbola nanitrikitrika ihany ny praiminisitry ny tetezamita teo aloha, Monja Roindefo Zafitsimivalo, fa ny filoha teo aloha,
Raharaha 7 febroary Adinon-dRajoelina tanteraka
Tsy nipoitra ary tsy fantatra izay misy an�i Andry Rajoelina, nandritra ny fanamarihana ny datin�ny 7 febroary, natokana hahatsiarovana ireo olona namoy ny ainy nandritra ny fananihan-dapa teny Ambohitsorohitra ny 7 febroary 2009 omaly.
Rivo Rakotovao "Aleo ny ho avy no banjinina"
Tonga nanatitra voninkazo tetsy Antaninarenina ihany koa omaly, nisolotena ny antoko HVM sy ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, ny minisi-panjakana misahana ny fambolena sy fiompiana no sady filohan�ny antoko HVM, Rivo Rakotovao.
Rasolonjatovo Honor� Mikororosy fahana ny fandraharahana ara-barotra Malagasy
Nisy fandinihana efa natao tamin�ny taona 2009 mba handrindrana ny tontolo fandraharahana ara-barotra eto Madagasikara nefa dia very an-javony fotsiny noho ny tsy fisian�ny fampiharana mazava ny tetikady napetraka,
Vidin-tsolika Hisondrotra indray afaka 3 volana
Tsy maintsy niditra an-tsehatra nifampiraharaha tamin�ireo orinasa vahiny mpaninjara solika eto Madagasikara ny fitondrana mahefa ho fisorohana ny fidangan�ny vidim-piainana izay mihoatra ny tokony ho izy tamin�izao volana febroary 2017 izao, hoy ny minisitry ny Angovo mpisolo toerana vonjy maika Raveloharison Herilanto.
Fiahiana ny sosialim-bahoaka Tsy voafehin�ny fanjakana intsony
Tsy misy izay tsy mikolay amin�ny fampandehanana ny fiainana andavanandro ny isan-tokantrano amin�izao fotoana izao.